Kedu ka nke nwere akwa ụfụfụ dị mma karịa oge opupu ihe ubi n'efu
Eleghi anya na \_ 'zuru ezu iji kwado ya gaa na mmụọ New York nke imewe mbụ. Mmụọ a dịkwa na b cartier \_ 'Boutied Boutique nke ise, nke mepere ụzọ na Septemba na nnọkọ dị egwu. Kemgbe afọ 1917, cartier akpọwo nke a \_ "Mansion \_" ụlọ ya na New York, mgbe ọ bụ akụkọ mgbe ochie dị adị.
Intal ga-ekpughe ụlọ ọrụ ahụ na-abụghị ndị na-abụghị ndị na - abụghị mkpụrụ ndụ mkpụrụ osisi nke Tesfala, ma ọ bụ na mba ọzọ, kwuru na ozi a bụ \_ "propreative na asọmpi \_". Otu mbipụta panassonic kwuru ọtụtụ ihe mbupụ ga-aga nnukwu ndị na-azụ ahịa na Eshia. A na-agwa Tesla, nke ketara ụlọ ọrụ a na-akpọ Richebend site na ị nweta ihe nlebara anya, a na-agwa gị ka ọ na-asọpụrụ ego na nkwarụ maka $ 0. Ijeri 75 na enyemaka ego steeti.
N'ime ọrụ a, anyị amụọla otu ngwakọ stack. The na-acha anụnụ anụnụ-odo na-eji na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ iji rite ihe niile site na eletrik na-emepụta ike nke ike na-acha anụnụ anụnụ na odo. Ikwupụta ihe na-enweghị atụ nke arụmọrụ na-acha odo odo na nke na-acha anụnụ anụnụ na ọkpụrụkpụ nke antinode nke na-eme ka ọ dị na-eme ka ọ dị na ọgbụgba na-acha odo odo.